Nin ku eedaysnaa Dilka Wasiir Siraaji oo la xukumay. – Hornafrik Media Network
Nin ku eedaysnaa Dilka Wasiir Siraaji oo la xukumay.
By HornAfrik	 On Jun 19, 2017
Dhageysiga Kiiskan oo todobaadkii hore la soo gaba gabeeyay, markii maxkamaddu dhageysatay marqaatiyaasha iyo qirashada ninkan lagu helay dilka ayaa ugu dambeyn saaka la riday xukunka.
Ninka xukunka dilka lagu riday oo ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ka mid ahaa Ilaalada Hanti dhowrkii Guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax, kaasoo xilkiisa ku waayay shilka lagu dilay wasiirka.
Koox Doonaysay inay weeraro ka fuliyaan Kenya oo la qabtay.
Madixii Alshabaab ee Gobalka Banaadir oo la qabtay.